Xorriyadda fakarka iyo diinta Islaamka – Kaasho Maanka
Xoriyadda fakarka sidoo kale na loo yaqaan xoriyadda damiirka, waa xoriyadda uu shaqsigu u leeyahay in uu haysto, ama tixgeliyo xaqiiq, aragti ama fakar si ka madax bananaan sida ay dadka kale u haystaan amaba u tixgeliyaan fakarkaas, xaqiiqdaas amaba aragtidaas. Arintan badanaa waxaa lagu qaldaa xoriyatul qowlka oo ay kala duwanyihiin. Xoriyadda fakarka waxa ay ka mid tahay koox xoriyado ah oo uu shaqsigu leeyahay, quruumaha dunidana badankood aqoonsanyihiin iskuna waafaqsanyihiin waxaana ka mid ah xoriyadda diinta, xoriyadda hadalka iyo xoriyadda cabirka fakarka.
Haddaba diinta islaamka maxay ka qabtaa in qofku fakaro? Diinta islaamka waa ay kasoo horjeedaa, mana tixgeliso fakar kasta oo khilaafsan ama aanan la jaanqaadayn sida diinta wax u wado. Iskaba daa in qofka lagu tixgeliyo fakarkiisee, waxaa lagu magacaabaa magacyo kala duwan sida caqlaani haddii uu yahay muslim doortay inuu fakaro. Waxaa kaloo sugan in qofkaasi fakarka dartii uu ku gaaloobo oo fakar kaliyah uu fakaray ayuu ku goynayaa xarigii ilaahay. Haddiise qofka fakarka iska leh yahay qof aanan muslim ahayn, waxay noqonaysaa in laga hortago fakarkaasi, lagana illaaliyo inuu saameeyo bulshadda islaamka ah, intaas waxaa sii dheer haddii ay jirto dawlad islaami ah, waxaa ku waajib ah in ay burburiso fakar waliba kaasoo kasoo horjeeda sida ilaahay inoogu soo fakaray.
Islaamku waa diin ku salaysan fakar, kaasoo kuwa aaminsan ay u arkaan inuu yahay midka ugu saxan uguna xaqsan dunida, hadadaba waxaa iswaydiin mudan xaqa miyay tahay inuu ka baqo baadil? Aqoonyahankii weynaa ee xagga xisaabaadka iyo xidigiska ee la oran jiray Galileo Galilei ayaa yiri:- “U malayn maayo in ilaahaygii caqliga igu manaystay, uu ii diidayo in aan isticmaalo caqligaas” xoriyadda fakarka marka aad inkirto, waxaad noqonaysaa aalad yar taasoo diintu u fakartay sidoo kalana laga xaqiray awoodda maskaxdiisa iyo xoriyadda fakarka!
Maxay tahay fikirka/fakarka ay diintu islaamku kasoo hor jeedo? Maxay tahay sababta ay ay diintu fakarkaa u diiday oo ay u mamnuucdey? Maxay tahay Xoriyadda fakarka ee aad xaq u leedahay inaa cabirto marka aad tahay qof muslim ah? Quruumaha dunidana waa kala fakar ayagoo ku salaynaya diinta iyo dhaqanka ay leeyihiin, maxay diinta islaamku kaga duwantahay kuwaa? Maxaa ka dhexeeya inaa fakarto iyo inaa ALLE weyne xarigiisa goyso? Qofka aan muslimka ahayn fikirkiisa iyo mabaa di’diisa maxay diintu ka qabtaa? Muxuu yahay fakarak ALLE weyne inoogu soo fakaray? Diinta Islaamku ma diin fakar ku salaysan baa? Maxaa ka dhexeeya… Akhri faalladan »
Adbaad UU mahad San tiihin
Diintu uma baahna inaaad ka fakarto
Amba aad rayigaga ku cabirto
WaaYo hadii aad rumaYsan tahaY in aY diintani
Tahay diinti alle swc
Allena aaad rumaysantay
Waa mxy sababta keenaysa inaad diinta riyigaga
Alleh( swc )wuxuu idhi
[ Al-i’Imran – 85 ]
Waad Mahadsantihin Dhmn Akhyaarta Pageka Kaasho Maan
Ilaa Maalinkaan Si kedisa u helay Ilaa Maanta kama Daalo Qkrmooyinkiina Aqoonta Xambaarsan
Runtii Wxan Dhihi Lahaa
Waa In aan Balaadhino shabakada
Mahadsnd In padn
Soo dhowoow sxb!
Maxaa soomaalida kala duwanaanshaha ku diray?
Sababta uu qofka soomaaliga ahi caalamkaas weyn uga danbeeyo oo uu u yahay qof aragti gaaban oo aan fakar dheer lahayn, qof aan doodi aqoon oo inta uu hadal yar tuurto sii orda, qof aan oggolaan karin wax uusan hore u la kulmin iyo qof aan si abaabulan u hadli karin oo wax isku qasan ku hadlaa waa in ay soomaalidu isku mid yihiin dhan kasta. Gobollada Bay iyo Bakool waxaa lagaga hadlaa afka May...
W/Q: Gallad Gurxan 5th July 2018
Addoonsiga diimaysan ee ay Carabtu kula kacday dadka diirka madaw